ခွဲစိတ်ကုသမှုပြီးနောက် ဂရုစိုက်သင့်သည်များ - Hello Sayarwon
ခွဲစိတ်မှုပြီးတဲ့အခါ သင်ဘာတွေခံစားရနိုင်သလဲ ။
ခွဲစိတ်မှုပြီးတဲ့အခါမှာသင်ဟာ မေ့ဆေးအရှိန်ကြောင့်အားနည်းပြီးရီဝေဝေခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ကသင့်ကို ပိုက်နဲ့ဲပဲဖြစ်ဖြစ်နှာခေါင်းအုပ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် အောက်ဆီဂျင်ထောက်ပံ့ပေးပါမယ်။ မေ့ဆေးရှိန်ကြောင့်ဖျားနာခြင်း၊အန်ခြင်းတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ သင့်ကိုဒါတွေကနေသက်သာစေဖို့ဆရာဝန်ကဆေးပေးပါလိမ့်မယ်။
ခွဲစိတ်ထားတဲ့ဒဏ်ရာကသင့်ရဲ့ပုံပန်းသွင်ပြင်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အတွက်သင်ဂရုစိုက်မိနေပါလိမ့်မယ်။ သင့်အနေနဲ့ သေချာဂရုစိုက်မယ်ဆိုရင်လုံးဝပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်ဒဏ်ရာကအများသောအားဖြင့်နှစ်ပတ်ဆိုကောင်းပါပြီ။ တကယ်လို့သင်က စတီးရွိုက်လိုမျိုးဆေးတွေသောက်နေရတာမျိုး၊တခြားကျန်းမာရေးအခြေအနေရှိတာပဲမျိုးမျိုးဆိုရင်တော့နှစ်ပတ်ထက်ပိုကြာနိုင်ပါတယ်။
သွေးမခဲစေဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ရင်သင့်အနေနဲ့နည်းနည်းလှုပ်ရှားနေပေးပါ။ အိပ်ရာပေါ်မှာပဲလှဲနေခြင်းကသင့်ကိုအနာမြန်မြန်မကျက်စေပါဘူး။ ဒါကသင့်ကိုသွေးခဲနိုင်ချေတောင်များစေပါတယ်။
ခြေထောက်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်နေပေးတာကသင့်ကိုသွေးမခဲစေတော့ပါဘူး။ ခြေထောက်လေ့ကျင့်ခန်းဆိုတာကဘာမှခက်ခက်ခဲခဲမဟုတ်ပါဘူး။ ဒူးကိုကွေးလိုက်ဆန့်လိုက်ဒါမှမဟုတ် ခြေကျင်းဝတ်ကိုလှည့်လိုက်ဒါတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
သင်ခွဲစိတ်မှုအပြီးမှာဆရာဝန်ကသင့်ခြေထောက်သွေးလည်ပတ်မှုကိုအထောက်အကူပြုတဲ့ အထူးခြေအိတ်ကိုပေးချင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာတော့နားလည်အောင်လုပ်ပါ။
ခွဲစိတ်ပြီးအနာမကျက်ခင်အချိန်မှာသင်ဟာရောဂါပိုးကူးစက်ဖို့လွယ်ကူနေပါတယ်။ ရောဂါပိုးကူးစက်နိုင်ချေနည်းဖို့အတွက်သင်ဟာဆရာဝန်နဲ့အနာကိုဘယ်လောက်ကြာအောင်ခြောက်သွေ့စေရမလဲမေးပြီးဆရာဝန်ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာသင့်ပါတယ်။ နေ့စဉ်ဒဏ်ရာကို ရောဂါပိုးဝင်နေလားဆိုတာစစ်ဆေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့။
ဒါ့အပြင်သင်မလုပ်သင့်တာတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ သင့်ရဲ့ဒဏ်ရာကိုကုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ပွတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်တာကအနာအတွက်မကောင်းပါဘူး။ ကပ်ထားတဲ့ပတ်တီးပြားတွေကိုဆရာဝန်မပြောဘဲမခွာပါနဲ့။ ဆရာဝန်ရေချိုးခွင့်မပေးမချင်းရေပတ်ဘဲတိုက်ပါ။ ဒါပေမယ့် ရေပတ်ပဲတိုက်တိုက်၊ ရေပဲချိုးချိုးသင့်ဒဏ်ရာကိုပလတ်စတစ်နဲ့အုပ်ထားရပါမယ်။
ချုပ်ရိုးကိုချုပ်ကြိုး၊တွဲစက်ဒါမှမဟုတ်ခွဲစိတ်ခန်းသုံးကော်တွေနဲ့ပိတ်ထားပါလိမ့်မယ်။ တွဲစက်နဲ့တွဲထားတာဆိုရင်အနာကျက်တာနဲ့ဆရာဝန်ကတွဲစက်တွေကိုဖြုတ်ပေးပါမယ်။ ဒဏ်ရာကအများသောအားဖြင့်၅ရက်ကနေ၁၀ရက်အတွင်းကျက်ပါတယ်။ ချုပ်ကြိုးနဲ့ဆိုရင်တော့အချိန်ကြာလာလို့ချုပ်ကြိုး ပျောက်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာဝန်ကဖြည်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ချုပ်ကြိုးစတွေ၊တွယ်စက်တွေ၊ ကော်တွေကိုလက်နဲ့ဆွခြင်းမပြုရပါဘူး။ တကယ်လို့ဒဏ်ရာကယားလာတယ်ဆိုရင်အယားပြေဖို့ဆရာဝန်ဆီကဆေးတောင်းနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ချုပ်ရာကသွေးထွက်လာတယ်ဆိုရင်ပုဝါသန့်သန့်ကိုယူပြီး၅မိနစ်ခန့်ဖိအုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့အဲဒါကအလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဆရာဝန်ခေါ်ပြီးဆေးရုံအရေးပေါ်ခန်းသွားပါ။
Incision Care After Surgery – Topic Overview. http://www.webmd.com/a-to- z-guides/incision- care-after-surgery-topic- overview. Accessed December 30, 2016.
Wound Care: Your Essential First Aid Care Guide. http://www.webmd.com/a-to- z-guides/wound- care-10/caring-for- surgical-wounds?page=2. Accessed December 30, 2016.
What happens after surgery. http://www.nhs.uk/Conditions/surgery/Pages/after-surgery.aspx
လမစေ့ကလေးငယ်တွေအတွက် အသက်ရှင်သန်နိုင်မည့် သားအိမ်တု